Ny sehatry ny fitsangantsanganana sy ny mpitondra eran-tany dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny zaza amin'ireo mpandika lalàna momba ny firaisana amin'ny zaza an-tongotra
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Kolombia » Ny sehatry ny fitsangantsanganana sy ny mpitondra eran-tany dia manolo-tena amin'ny fiarovana ny zaza amin'ireo mpandika lalàna momba ny firaisana amin'ny zaza an-tongotra
Jona 2, 2018
fiarovana ny zaza
Fihaonana an-tampony iraisam-pirenena momba ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany no hatao ao amin'ny Agora Bogota Convention Center ao amin'ny Avenida Calle 24 # 38 - 47 any Bogota, DC, Kolombia, manomboka ny Alarobia 6 Jona ka hatramin'ny Alakamisy 7 Jona 2018.
Ny dia sy ny fizahan-tany dia nivelatra haingana eran'izao tontolo izao tato anatin'ny taona vitsivitsy, ary ireo firenena dia mahazo tombony amin'ity fitomboana ity. Ity indostria ity dia mampiasa olona an-tapitrisany, manome fidiram-bola amina miliara, ary manana ny mety hampiala an-jatony tapitrisa amin'ny fahantrana. Na izany aza, rehefa mandehandeha eran'izao tontolo izao ny mpandeha dia toy izany koa ireo izay manimba ankizy amin'ny alàlan'ny fanararaotana ara-nofo na fanararaotana azy ireo.
Amin'ny faritra rehetra zahan'ny mpizahatany nasionaly sy iraisam-pirenena, ary mpanao dia lavitra, atahorana iharan'ny fanararaotana ara-nofo sy fanararaotana ara-nofo ny ankizy. Matetika ny mpanararaotra dia manararaotra ny fahantrana, ny fanilihana ara-tsosialy, ny lalàna malemy ary ny kolontsaina tsy manan-tsimatimanota.
Ireo traboina dia azo hararaotina hatraiza hatraiza, ao anatin'izany ny trano fisakafoanana, hotely, fisotroana ary trano fanaovana fanorana ary koa eny amin'ny arabe sy amin'ny tsy miankina na amin'ny alina na amin'ny antoandro.
Tsy misy faritra tsy voakitika amin'ity asa ratsy ity, satria tsy misy firenena voaro, indrindra amin'ny fanamorana ny fahafahan'ireo mpandika lalàna mifampikasoka amin'ireo iharan'izy ireo amin'ny alàlan'ny fitaovana sy sehatra natolotry ny teknolojia Internet sy fifandraisana, anisan'izany ny telefaona finday.
Lahateny famaranana sy valan-dresaka ho an'ny haino aman-jery izay ahitana ny filohan'ny Colombia, Juan Manuel Santos Calderon, dia hatao amin'ny 7 Jona amin'ny 1700 ora.
Ny mpanatrika manamarika dia ahitana:
• Juan Manuel Santos Calderón, filohan'i Kolombia
• Sandra Howard mendri-kaja, minisitry ny fizahantany lefitra, governemantan'i Kolombia ary filohan'ny UNWTO General Assembly teo aloha
• Maria Lorena Gutiérrez, minisitry ny varotra, indostria ary fizahan-tany, governemanta kôlômbia
• Griselda Restrepo, Minisitry ny Asa, Governemanta any Kolombia
• Mariama Mohamed Cisse, talen'ny sampana misahana ny raharaha sosialy ao amin'ny Vondrona Afrikanina sy mpandrindra, Komitin'ny manam-pahaizana afrikanina momba ny zon'olombelona sy ny fiahiana ny zaza (ACERWC)
• Helen Marano, filoha lefitra mpanatanteraka, raharaham-bahiny, filan-kevitry ny fizahantany ary fizahan-tany
• Philip KH Ma, filoha lefitry ny Antenimieran'ny fizahantany ao Shina
• Alejandro Varela, Tale lefitra ho an'ny amerikanina, Fikambanan'ny Firenena Mikambana momba ny fizahantany manerantany
• Cornelius Williams, Lehiben'ny fiarovana ny zaza manerantany, UNICEF
• George Nikolaidis, Filohan'ny Komity Lanzarote, Filankevitra any Eropa
• Bjorn Sellstrom, Mpandrindra ny heloka bevava atao amin'ny ekipa ankizy, foibe INTERPOL
• Ramatoa Margaret Akullo, mpandrindra ny Tetikasa ho an'ny GLO.ACT, UNODC HQ any Wina
Ny fihaonana an-tampony dia karakarain'ny sy ny: Ministeran'ny varotra, indostria ary fizahan-tany any Kolombia; Ny Fahefan'ny fizahan-tany ao amin'ny Distrikan'ny renivohitra Bogota; Ny minisiteran'ny raharaham-bahiny any Kolombia; Manampahefana momba ny fiarovana ny zaza any Kolombia; ary Fundación Renacer / ECPAT Kolombia. Izy io dia iarahan'ny: The World Travel and Tourism Council (WTTC), ny Task Force avo lenta momba ny fiarovana ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, The United Nations Children Fund (UNICEF), ny biraon'ny Firenena Mikambana momba ny zava-mahadomelina sy ny heloka bevava (UNODC ), ary ny ECPAT International.
Ny fihaonana an-tampony dia fanarahana ny Fandalinana manerantany momba ny fanararaotana ara-nofo ny ankizy amin'ny fitsangatsanganana sy fizahan-tany, ny ezaka natambatra voalohany nataon'ny mpiara-miasa 67 hahatakatra ny toetoetran'izao tontolo izao sy ny haben'ny asa ratsy. Ny fanadihadiana dia nametraka ny tolo-kevitra izay mitaky hetsika iraisana avy amin'ny ONU, governemanta, ONG, polisy, ary orinasa mifantoka amin'ny fizahan-tany. Ny fivoriana dia handray marimaritra iraisana amin'ny fomba fampiharana bebe kokoa ireo tolo-kevitra ireo.
Hisy ny fanontaniana hapetraka mandritra ny fotoana rehetra ataon'ny mpandray anjara ary raisin'ireo mpanao gazety ny fanatrehana fivoriana rehetra. The ny media dia afaka mangataka fahazoan-dàlana sy fisoratana anarana eto.
Hong Kong Airlines dia manatsara ny fisian'ny isam-paritra amin'ny serivisy Manila vaovao
Kakaako faritry ny toetr'andro any Honolulu: azo antoka ho an'ireo mpizahatany japoney?
Vaovao momba ny dia any Suisse
Rehefa misokatra indray ny sisintany, ataon'ny Zurich fizahantany ho laharam-pahamehana ny faharetana
Mpandeha an'habakabaka roa no nandoa onitra tany Kanada noho ny nanehoany valin'ny fitsapana COVID-19 sandoka
Saint Vincent sy ny Grenadines vaovao momba ny dia
Ny MAP International dia mbola manohy mandefa fanampiana ho an'ireo niharan'ny fipoahan'ny volkano La Soufrière any St.Vincent
Kenya dia manery ny fiaraha-miombon'antoka amin'ny fanjakana sy ny tsy miankina amin'ny famahana ny adin'ny olombelona sy ny bibidia
20 ora lasa izay
Holland America Line dia mamerina ny fitsangantsanganana an-tsambo any Greece amin'ny volana Aogositra
Seranam-piaramanidina Sheremetyevo dia manolotra serivisy manokana ho an'ireo sisa velona tamin'ny WWII nandritra ny fankalazana ny Andro Fandresena
Volaris: 107% ny fahafaha-manao 2019 miaraka amina 82% entana amin'ny aprily 2021
Vaovao momba ny dia any Eropa
Ny komisiona eropeana dia manentana ny firenena eropeana mba hisokatra indray ho an'ireo vahiny mpanao vaksiny